योग्य बैठकको लागि १० नियमहरू Martech Zone
योग्य बैठकहरूको लागि १० नियमहरू
सोमबार, डिसेम्बर 4, 2006 शुक्रवार, अक्टुबर 24, 2014 Douglas Karr
केहि व्यक्तिहरु टाउको कोरेर जब म एक बैठक को लागी ढिला भयो वा किन म उनीहरुका बैठकहरु अस्वीकार। उनीहरू सोच्दछन् कि यो असभ्य छ कि म ढिलो देखा पर्न सक्छु ... वा केही पनि देखाउँदिन। के उनीहरूले कहिल्यै पहिचान गरेनन् कि म योग्य बैठकको लागि कहिले ढिलो गर्दिन। मलाई लाग्छ यो असभ्य छ कि उनीहरूले बैठक आयोजना गरे वा मलाई पहिलो स्थानमा आमन्त्रित गरे।
आवश्यक परेको बेला योग्य बैठकहरू बोलाइन्छन्।
योग्य बैठकहरू अर्को years बर्षको लागि निर्धारित छैन ... बैठकहरू कल गर्नु हास्यास्पद हो कि कुनै लक्ष्य छैन र उत्पादकता अवरोध गर्दछ।
उचित बैठकहरूले समस्याको समाधान गर्न वा समाधान कार्यान्वयन गर्न टिमको रूपमा काम गर्न सही दिमागहरू एकत्रित गर्दछ।
लायक मिटिंगहरू आक्रमण गर्ने वा अन्य सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउन प्रयास गर्ने ठाउँ हुँदैन।
योग्य बैठकहरू आदर, समावेशीकरण, टीम वर्क र समर्थनको स्थान हो।
योग्य बैठकहरू को लक्ष्य को एक सेट को साथ शुरू र को को एक कार्य योजना को साथ समाप्त गर्न को लागी, के र कहिले।
योग्य बैठकहरूमा सदस्यहरू छन् जुन विषय ट्र्याकमा र समयमा राख्छ ताकि सबै सदस्यहरूको सामूहिक समय बर्बाद नहोस्।
योग्य बैठकहरूमा तोकिएको स्थान हुनुपर्दछ जुन सबै सदस्यहरू भन्दा पहिले राम्रोसँग चिनिन्छ।
लायक मिटिंगहरू तपाईको बट कभर गर्ने ठाउँ होइनन् (त्यो ईमेल हो)।
दर्शकहरू पाउनको लागि प्रयास गर्न लायक मिल्ने ठाउँहरू होइन (त्यो सम्मेलन हो)।
त्यहाँ अपवाद छन्। यो योग्य बैठक मनपरायो ... ओह ... र M & Ms को साथ।
टैग: राम्रो बैठककसरी बैठक गर्नेसभाहरूमाबैठकको नियम
प्रत्येक गृह कार्यालयलाई एक आवश्यक छ!
वैध ईमेल ठेगाना लम्बाई
डिसे 6, 2006 मा 1: 21 AM
ब्रान्डनले बैठकको लागतको सम्बन्धमा एक उत्कृष्ट पोष्ट थप्दछ: (उपस्थितहरूको संख्या * बिलयोग्य दर * बैठकको लम्बाई = $$$ ठुलो पैसा)
डिसेम्बर १, २०१62006:२:3 अपराह्न
मलाई धेरैजसो बैठकहरू मनपर्दैनथ्यो र भेटें, प्राय: जसो बैठकहरूको पनि फाइदा वा शेयरधारकको मानसँग सानो सम्बन्ध थिएन। तपाईले यो सूची सबै ब्यवस्थापकलाई बेच्नु पर्छ
डिसेम्बर १, २०१62006:२:4 अपराह्न
M & M's राम्रो छ ... Brownies राम्रो छन्! कहिले बैठक भएको थियो? LOL
डिसेम्बर १, २०१62006:२:6 अपराह्न
बैठकहरूको बारेमा बैठकहरू ... त्यो बिर्सनुभयो! अर्ग!
जनवरी १, २०१ 20 १२::2011 अपराह्न
हुनसक्छ तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ http://www.agreedo.com। यसले तपाईंको धेरै पोइन्ट्सहरूलाई सम्बोधन गर्दछ जसले तपाईंको अनुसार बैठकहरूलाई योग्य बनाउँदछ।